Fifandraisana izany koreana ny olona. Be fitiavana koreana olon-tiany tao Korea
Posted on 07.03.2019, 20:11 By Goodsite
Aho eo amin’ny fifandraisana izany koreana ny olona? Dia ity lehilahy koreana ny olon-tiany, na tsia? Fa dia inona no manaraka ny mpamaky dia manontany tena hoe: nihaona koreana ny olona an-tserasera mikasika ny roa volana lasa izay. Izahay nanoratra ny fotoana vitsivitsy mampiasa mailaka sy tsy ela isika, efa nifanakalo laharana telefona sy ireo soratra avy ny fotoana dia nifoha mandra-pahatongan’ny fotoana isika resin-tory. Tsy ela taorian’ny isika, dia hihaona amin’ny olona ary lasa namana tsara na dia samy nitondra ny olona niaraka taminay ny fivoriana voalohany, noho izany dia efa kely ny vintana hiresahana momba ny zavatra tena manokana.
Rehefa afaka izany, dia nanomboka niantso multiples fotoana isan’andro ho an’ny quick-minitra chats mba hijery ahy sy ny sms amin’ny eo.
Rehefa avy izy, dia maka taonina ny sary antsika miaraka sy ahiahinao tifitra ny ahy rehefa tsy izaho no mitady
Izy ihany koa dia mahazo miaro tena, mitondra ny zava-drehetra, misisika amin’ny fandoavana sy ny tongotra mipetraka eo akaiky, toy izany foana isika mikasika ny amin’ny fomba. Efa rehetra ny tenimiafina sy ny usernames fa izy nanolo-tena (toy ny Amerikana, fantatro ny mpivady fa tsy mahalala izay momba ny tsirairay.).
Hoy izy: izaho no mahafatifaty loatra aho rehefa mikorontana ny ny koreana teny sy grins toy ny adala aho rehefa miantso azy ho bob
Izy no mahatonga ny azo antoka isika, rehefa miaraka amin’ny namako aho, dia hijanona amin’ny azy sy vola bebe kokoa ho azy noho ny olon-kafa aza Izy dia handeha hampahafantatra ahy ny fianakaviany, na dia tsy voalaza izany. Ny zava-misy an-trano aho tsaina sy mahafantatra ny lalana manodidina ny trano toy ny mpanohana dia zavatra iray izy dia tsy mitsahatra ny milaza hoe»tena mahafinaritra izany»ary hoy izaho no tonga lafatra anarana vehivavy.
Amiko, izany rehetra izany toa toy ny famantarana izy tia ahy, fa izy tsy nilaza na inona na inona momba ny fifandraisana
Izaho heverina fotsiny mihevitra aho amin’ny fifandraisana izany koreana ny olona? Izy dia milaza fa tena sarotra ho azy mba hanehoany ny fihetseham-pony ary izay mitaky fotoana aloha dia afaka milaza na inona na inona mafy ihany Koa, dia mety ho kely manahy momba ny fahasamihafana taona. Izy no taona ny zokiny aza izy milaza isika eo amin’ny tonga lafatra amin’ny fahamatorana ny haavon’ny Iray amin’ireo fanontaniana farany, misy torohevitra momba ny fomba fihetsiny manoloana koreana olona izay mety ho hafa noho ny Amerikana. Foana aho avelao izy handray an-tanana, ary vao miezaka ny manaraka ny fa mandritra izany fotoana izany dia manome ampy ny zava-tsarotra izy, fa tsy leo. Mieritreritra aho mihevitra fa ny sipa efa mi-lehilahy koreana loatra, ka fantatro koreana goyim ny eritreritra, fihetseham-po tsara, mangataka aminy fotsiny fifandraisana, amin’ny fomba ahoana no nahitanao azy an-tserasera. KIMCHI OLONA — lehilahy teraka sy lehibe tao Korea Atsimo, izay afaka manara-maso ny koreana razambeny, toy ny, — tapitrisa ireo taranaka lasa izay
← Korea Atsimo Sendra Olon-Kafa Chat Room Tsy Misy Fisoratana Anarana
Korea Atsimo Vahiny Chat Room Tsy Misy Fisoratana Anarana →
© 2020 Ny Lahatsary Amin'ny Chat Korea`